A Wanderer's Notebook: February 2008
နွေတပေါင်း ၊ ရွှေကျောင်းရယ်တဲ့
ချစ်ခင်သူဆွေအများ ၊ သွားပေါ့ဌာနီ
ငွေတာရီ ၊ ပြန်ပြီကွယ့် ရွာကျေး ။
၀သာန်ဆန်းကာမှ ၊ ရွှင်လန်းစွာဆွေအများရယ်နဲ့
ဇောစိုက်လို့တွေး ။ ။
Posted by Aung Phyoe at 18:53 No comments: Links to this post
တစ်လောကလုံးက ချစ်သူတွေ အမှတ်တရပျော်ကြမယ့်နေ့တဲ့လေ ။
တကယ့်တကယ်တော့ သည်နေ့ဟာ ကျတော်နှင့် ဘာမှမပါတ်သက်ပါ ။ မျှော်လင့်ခြင်း ၊ တစ်ဖက်သတ်စတာတွေကို လည်းအယုံအကြည် မရှိတော့တော့ သည်နေ့ဟာ ကျတော်နှင့် တော်တော်ကြီးကို စိမ်းနေတယ် ။
သည်နေ့နံနက် သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ Chatting မှာတွေ့တော့ သူပြောတဲ့ စကားတစ်ခွန်းဟာ တွေးစရာဖြစ်ခဲ့ရတယ် ။
"ချစ်သူရည်စားနဲ့ ကျင်းပမှ ချစ်သူများနေ့ မဟုတ်ပါဘူး ။ ငါတို့ မှာလည်း ချစ်ရတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ ၊ မိဘတွေ ၊ သူငယ်ချင်းတွေ ရှိတာပဲ ။ သူတို့နှင့် ကျင်းပရရင်လည်း ဒါဟာ ချစ်သူများနေ့ပါ" တဲ့ ..... ။
သည်လိုဆိုတော့လည်း သည်နေ့ဟာ လူတိုင်းအတွက် အဓိပ္ပာယ် ရှိတာပေါ့နော် ။ ထူးထူးခြားခြား တော့မရှိပါ ။ အချစ်ဆိုတာ မျှော်လင့်ချက်လို့ ယုံကြည်ခဲ့တုန်းက မရေးတတ်ရေးတတ်ရေးထား တာလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ အဲသည်တုန်းကတော့ ချစ်သူများနေ့ဆိုတာ တကယ်ကို ရင်ခုန်စရာ ကြီးပေါ့ ။ ခုပြန်တွေးတော့ သနားစရာလိုလို ၊ ဟားစရာလိုလို ကြီးပါ ။
တစ်ချိန်တုန်းက ကျတော့်အတွက် သိပ်အရေးမပါခဲ့တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ချစ်မိခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း နှစ်တွေမှာ အဝေးမှာ ပျော်နေမယ့်သူ့ကိုရည်မှန်းပြီး ချစ်သူများနေ့ကို တစ်ယောက်ထည်းကျင်းပမိတဲ့ ယောက်ျား တစ်ယောက်အဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်တွေးမိတိုင်း သိပ်ကိုရှက်မိတယ် ။
ကျတော် အသက် (၂၀) ပြည့်တဲ့ နေ့အထိ ကိုယ်နဲ့တိုက်ရိုက် မသက်ဆိုင်တဲ့ အထိမ်းအမှတ် နေ့တစ်နေ့မှာ ကျတော် မင်းကိုတမ်းတနေတဲ့အတွက် အခုအချိန်မှာတောင် ကျတော်ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရှက်မိဆဲ။ သည်နေ့ သည်အချိန်မှာ ကိုယ်စီ ပျော်နေကြသူတွေနဲ့ရော ၊ မပျော်နိုင်လို့ မှိုင်နေကြတဲ့ လူတွေနဲ့ရော ကျတော်က မသက်ဆိုင်လှဘဲ တစ်ဦးတည်း ကွဲထွက်လို့နေတော့တယ် ။ ကျတော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ မင်းမရှိပေမယ့် ကျတော့်စိတ်ထဲမှာတော့ မင်းရှိနေခဲ့တယ် လေ ….။
ကျတော် သည်ခံစားချက်တစ်ခုနဲ့ သည်လမ်းလေးဆီကို ၀ိုးတစ်ဝါးလှမ်းလို့လာနေတယ် ။
မင်းဟာ ကျတော့်အတွက် အရေးပါသလောက် ၊ ကျတော်ဟာ မင်းအတွက် အရေးမပါလှပါဘူး ….. မဟုတ်လားကွယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျတော်အတွက်တော့ မင်းရဲ့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ စကားတစ်ခွန်းဟာ ကျတော်ရဲ့ ရင်ခုန်သံပါ ။ မင်းရဲ့ အကြည့်ဟာ ကျတော့်အချစ်ရဲ့ မျက်နှာစာပါ ။ မင်းရဲ့ရယ်သံမော့မော့ ဟာလည်းအချစ်ရဲ့သံစဉ်ပါ ။ တစ်နေရာမှာ တွေ့ရင် ကျတော့်ကို မျက်နှာမပျက်ဘဲ နှုတ်ဆက်တတ်တဲ့ မင်းရဲ့အပြုံးဟာလည်း ကျတော့်ရဲ့ အရှုံးပါ။ အကြောင်းမသိတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ နောက်ရင် ကိုယ့်အကြောင်းကိုသာသိတဲ့ ကျတော်ရဲ့ အရှက်ဟာလည်း မင်းရဲ့ ထာဝရအနိုင်ရမှုပါပဲ ။
နှစ်ဦးသဘောတူချစ်ကြတာမှ အချစ်မဟုတ်ပါဘူး ။ တစ်ဖက်သတ်အချစ်ဟာလည်း အချစ်ပါဘဲ လို့ ကျတော်ပြောခဲ့ဖူးတယ် ။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့နေ့မှာတော့ သည်သတ်မှတ်ချက်ကို ကိုယ်တိုင်ငြင်းပယ်နိုင် မယ်လို့ ကျတော်ယုံကြည်ထားမိတာ ။ ဒါပေမယ့်လည်း ခုအချိန်အထိလည်း ကျတော့်အတွက် တစ်ဖက်သတ်အချစ်ဟာ အချစ်လို့ မည်ဆဲပါ ။
မင်းနဲ့ ပါတ်သက်လို့ ကျတော်တစ်ယောက်ထည်း တိုးတိုးတိတ်တိတ်ကျင်းပတတ်တာ တစ်နှစ်မှာ နှစ်ရက်တော့ရှိတယ် ။ တစ်ခုကမင်းမွေးနေ့ ။ ကျတော်လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က မင်းအတွက်သီးသန့် လုပ်ထားတဲ့မွေးနေ့လက်ဆောင်ကို ခုထိမင်းကိုမပေးရဲသေးဘူး ။ မင်းနာမည်ကိုရေးထားတဲ့ Phone Chain ရဲ့တစ်ဖက်တစ်ချက်က အသည်းပုံလေးနှစ်ခုကို မင်းမမြင်ချင်အောင်ပြုပြီး ကျေးဇူးတင်လိုက်တာလို့ မင်းကျတော့် ရည်ရွယ်ချက် (အချစ်ကို) စော်ကားဦးမှာ မဟုတ်လားကွယ်။ သည်လိုနေ့တွေတိုင်း မင်းကိုကျတော်သတိရတယ် ။ မင်းကိုကျတော်ဖုန်းဆက်ခဲ့ရင်လည်း ကျေးဇူးလို့တော့မင်း စလိုက်စရော ပြောမယ် ။ ဒါပေမယ့် ကျတော်အမြဲတမ်း မေ့ထားနိုင်ခဲ့တဲ့ မင်းဘေးမှာလည်း သေချာရှိနေမယ့် လူတစ်ယောက်ကို အဲဒီအချိန်မှာတော့ မေ့နိုင်လိမ့်မှာ မဟုတ်ဘူး ။
သည်တော့ သိပ်စိတ်ကူးယဉ်တတ်တဲ့ ကျတော်ဟာ အဲဒီနေ့မှာ စာအုပ်တစ်အုပ်ကို မှတ်မှတ်ရရ၀ယ် ။ နောက် ပုစွန်ဆိတ်သိပ်တူတယ်လို့ မင်းပြောဖူးတဲ့ကျတော့်လက်မှတ်ထိုး ။ နောက် ( သြဂုတ် ၊ ၁၁ ၊ --- ) ဆိုတဲ့ရက်စွဲရေး ။ နောက် အောက်မှာ “ရည့် မွေးနေ့အမှတ်တရ” ဆိုပြီးရေးလို့ စာအုပ်စဉ်အကန့် တစ်နေရာမှာခွဲပြီး အမှတ်တရသိမ်းထားတတ်တယ် ။ မရယ်နဲ့ နော်ကွယ် …. ။ ရှက်တော့ ရှက်တယ် … ။
အမှန်တော့ ကျတော့်စာအုပ်စဉ် ဘယ်ဘက်ခြမ်း အကန့်ထဲက မဖတ်ဖြစ်ပဲ သိမ်းထားခဲ့တဲ့ စာအုပ်(၄) (၅) အုပ်ဟာ ကျတော်ရဲ့ စိတ်ဒါဏ်ရာတွေပါ ။ နှစ်တိုင်းရဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄) ကိုလည်း သည်လိုအတိုင်းပဲ ကျင်းပတတ်ခဲ့တယ် မဟုတ်လား ။
ဒါပေမယ့် သည်တစ်နှစ် ချစ်သူများနေ့မှာတော့ နည်းနည်းအပြောင်းအလဲလေး ဖြစ်ဖြစ်ခံစားကြည့်ချင်တယ် ။ ဒါကြောင့်လည်း မင်းရဲ့အရိပ် ၀ိုးတစ်ဝါးရှိနေဦးမယ့် သည်လမ်းလေးကို ကျတော် လာခဲ့မိတာ ။
သည်လမ်းလေးဟာ ကျတော်တို့မြို့လေးရဲ့ ထင်ရှားတဲ့လမ်းတွေကြားမှ တစ်ခုလည်းမဟုတ်ပါ ။
လမ်းလေးဘယ်မှာစလို့ ဘယ်မှာဆုံးမှန်းလည်း ကျတော်မသိ။ ဒါပေမယ့် ကျတော့်အတွက် သည်လမ်းခရီးဟာ ချစ်သူ့မင်းရဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ အဆုံးသတ်တယ် ။ သေချာပြောရရင်တော့ တစ်ချိန်ကမင်းနေထိုင်ခဲ့တဲ့ အိမ်လေးရှိတယ်ပေါ့ ။ ခုချိန်မှာ မင်းမရှိတော့ပေမယ့် တစ်ချိန်တုန်းကတော့ ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ဖြစ်တည်မှုဟာ ကျတော်ကို့ စွဲဆောင်ဖို့ လုံလောက်ပါတယ်။ ခုလို နေ့မျိုးရဲ့ နံနက်စောစော လူသူကြဲပါးချိန်မှာ လမ်းကလေးထဲကို တစ်ယောက်ထည်း စက်ဘီးစီးသွားရတာဟာ ရင်ခုန်လှိုက်မောဖွယ် ကောင်းနိုင်ပါလိမ့်မည် ။ ဒါမှမဟုတ် ရင်နာဖွယ်ကောင်းပါလိမ့်မည် ။
သည်လမ်းလေးအကြောင်းကို အနည်းငယ်ပြောဖို့တော့လိုမည်ထင်သည် ။ လမ်းဆိုသော်လည်း “ဆင်သွားလမ်းဖြစ်” ဆိုသောလမ်းကလေးမျိုးဖြစ်သည် ။ သူ့အိမ် ၊ ကျတော့်အိမ် နှင့် ကျတော်တို့ ကျူရှင်ကြား ဖြတ်လမ်းလည်းဖြစ်သည်။ သည်လမ်းလေးသည် ကျဉ်းပါသည် ။ အနည်းဆုံး စက်ဘီး နှစ်စင်း ၊ ဆိုင်ကယ် နှစ်စီး ရှောင် နိုင်ယုံသာ ကျယ်ကောင်းကျယ်မည်။ လမ်းလေးသည် လူလည်းပြတ်တတ်သဖြင့် သူကအဖော်သူငယ်ချင်း မရှိရင်တော့ ၊ လမ်းလေးမှမလာဘဲ အိမ်မှလိုက်ပို့ တတ်သည် ။
နောက်လမ်းလေးရဲ့ တစ်ခုထူးခြားချက်က ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်း တစ်ခုထဲမှ လည်းဖြတ်သွားရခြင်းဖြစ်သည် ။ ကျောင်းဝန်းသို့ ၀င်ခါနီးတိုင်း စက်ဘီးစီးရင်း ဖိနပ်ကိုချွတ်ရတာ စွန့်စားခန်းတော့ နည်းနည်းဆန်သည်။ ကျောင်းဝန်းအပြင်ရောက်ရင် စက်ဘီးရပ်ပြီးတော့ ဖိနပ်ပြန်စီးရသေးတာ ကလည်း အလုပ်တစ်ခု (ဟိုတုန်းကတော့ မင်းအိမ်လာရတာ သိပ်အလုပ်ရှုပ်တာပဲကွာလို့ ကျတော်ပြောခဲ့ဖူးတယ်) ။ နောက် သဲထူထူ ဖုတ်ထထလမ်းကို ဖြတ်ပြီး မင်းတို့ ၀န်းရှေ့ကိုရောက်ရင်လည်း ကုန်းမြင့်အတက်ကြီးကိုလည်း တတ်ရသေးတယ် ။ ကုန်းတတ် ထိပ်ရောက်တိုင်း ကျတော်ကမောတယ်လို့ ပြောရင် ‘အပြန်ကျ အရမ်းသက်သာပါတယ်ဟာ ။ ခုကုန်းတက်ကြီးကို အသာလေးလျောဆင်းသွားရမှာ’ လို့ မင်းပြောတတ်တယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ အဲဒီတုန်းကလမ်းကလေးဟာ ကျတော့် အတွက် ရင်မခုန်စေခဲ့တာ တော့အမှန်ပင် ။ နောက်သည်လမ်းလေးကို ကျတော်တို့ ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်းတွေအတူတူလာတိုင်း သိပ်ရင်ခုန်တာပဲကွာ လို့ပြောတတ်တဲ့ သူတစ်ယောက်ကိုလည်း စိတ်ရှင်းရှင်းနှင့် ၀ိုင်းစနောက် နေနိုင်ခဲ့ကြတာလည်း အမှန်ပင်။ အခုတော့ … ။
ခုအချိန်မှာလည်း လမ်းကလေးကိုကြည့်ရတာ လွန်ခဲ့တဲ့ (၄) (၅) နှစ်ကအတိုင်းအပြောင်းလဲသယောင် ။ ဒါဟာလည်း ခုအချိန်မှာ ပြောင်းလဲနေတဲ့ကျတော့် ရင်ခုန်သံကို သရော်နေတာလား ။ အမှန်ဆို သည်လမ်းလေးထိပ်မှာ မြို့ထဲကကျူရှင်သွားဖို့ မင်းကိုကျတော် စောင့်နေကြ ၊ နောက် … လမ်းလေးဆီကို စိတ်မရှည်တဲ့ အကြည့်နဲ့ကြည့်တတ်ပြီး မင်းကိုစောင့်နေကြ ။ နောက် ကျူရှင်သွားရာ သည်လမ်းလေးတစ်လျှောက်မှာ William Wordsworth ရဲ့ကဗျာစာသားတွေရော ၊ တောင်တွင်းရှင်ငြိမ်းမယ် ရဲ့ ကဗျာစာသားတွေရော ၊ နောက် သီချင်းစာသားပေါင်းစုံရော ၊ အပြောင်အနောက်ပေါင်းစုံရော ၊ စိတ်ဆိုး စိတ်ကောက် ၊ ပြန်ချော့ ပြန်တည့် စတဲ့ ခံစားမှုပေါင်းစုံရော ပြန့်ကျ နေခဲ့ပြီးသားပါ ။ ခုတော့ လမ်းကလေးကလည်း မေ့နိုင်လွန်းပါသည် ။
အချစ်တစ်ခုမှာ ဖွင့်ဟမှုနောက်ကျတာ ၊ ခွင့်မသာတွေ ရှိနိုင်ပေမယ့် လမ်းလေးကို ဖြတ်သန်းရာမှာတော့ သည်လို ကန့်သတ်ချက်တွေ မရှိနိုင်ပါ ။ ဒါပေမယ့် လမ်းလေးကို ဖြတ်သန်းရာမှာ တော့ နောက်ကောက်ကျသူ မဖြစ်ချင်တော့ပါ ။ စက်ဘီး ခြေနင်းကို တအားဖိနင်းပြီး လမ်းတစ်လျှောက်အမြန် ဖြတ်သန်းခဲ့မိတယ် ။ ကံကောင်း တာတစ်ခုက တရိတ်ရိတ် ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ လမ်းတစ်လျှောက်မှာ အခြားမည်သည့် လူသွား လူလာမှ မတွေ့ခဲ့ ။
လမ်းလေးရဲ့အဆုံး မင်းရဲ့အိမ်ရှေ့က သစ်ပင်အောက်ကိုရောက်တော့ စက်ဘီး ရပ်လိုက်တယ် ။ မင်းမရှိတာ သေချာတဲ့ အိမ်ဝကိုလည်း လှမ်းမကြည့်မိခဲ့ ။ လမ်းကလေးကို ပြန်ကြည့်တော့ အကွေ့အကောက်တွေကြောင့် တစ်ဆုံးမမြင်ရ ။ လမ်းကလေးကတော့ အရင်အတိုင်း ကျတော့်ကို ဆက်ဆံဆဲပင် ။ သဲတောထဲကို ဘီးဆွဲသွားပြီး ကျတော်ချော်လဲအောင် ကြည်စယ်တတ်ဆဲ ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းအတွက်က ခရေပင်အောက်မှာ ဖိနပ်ပြန်စီးတော့ ခရေပန်းသင်းသင်းလေးတွေ ခြွေချပေးကာ နှစ်သိမ့် တတ်ဆဲ ။ မင်းတို့ ၀န်းအရှေ့ ကုန်းတတ်ကြီးမှာ ဖတ်ဖတ်မောအောင် ကျတော့်ကို မာန်ဖီဆဲ ။ တကယ့် တစ်ကယ်တော့ သည်လမ်းလေးကလည်း ကျတော့်မင်းကို ချစ်ရတဲ့ အချစ်ထဲက အချစ်တစ်ပါးပါ။ အနည်းဆုံး တော့ ကျတော်ကို ရူးတယ် စိတ်ကူးယဉ်တတ်တယ် ဆိုပြီး မကျီဆယ် တတ်ပါဘူးနော် … ။
အနည်းဆုံး တစ်ချိန်တုန်းကအချစ်တွေ ၊ ခင်မင်မှုတွေကို ပြန်လည်သက်ဝင်စေအောင်တော့ နိုးပုတ်ပေးခဲ့ပါတယ် ။ နံနက်ခင်းမြူ နှင်းဝေေ၀ ၊ ရင်ခုန်သံနွမ်းနယ်တဲ့ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကို သူကြိုဆို လက်ခံယုံသာမက မြေငွေ့တွေနဲ့ထွေးပိုက်ခွင့်ပေးခဲ့တယ် ။ အနည်းဆုံးတော့ ကျတော်အတွက် ၊ မင်းနဲ့ပါတ် သတ်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတစ်ခု ကျင်းပရာမှာ ပါဝင်တတ်ရောက်သူအဖြစ်တော့ လမ်းကလေးက အားပေးခဲ့သားပင် ။
ခဏမျော်ကြည့်ပြီးတော့လည်း ကျတော်ပြန်ခဲ့သည် လမ်းကလေးကို ကျောခိုင်းပြီးလမ်းမကြီးဖက်ကို နင်းလာခဲ့သည် ။ လမ်ကလေးကို မျော်ကြည့်ပြန်တော့လည်း လူသွားလူလာတွေနဲ့ စည်ကားစပြုပြီ ၊ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ ၊ ဈေးဝယ်တွေနှင့် လွန်ခဲ့တဲ့ (၃) (၄) နှစ်ကထက်စာရင်တော့ အတော်လေး စည်လာပြီ ။ လမ်းကလေးလည်းအတွေ့အကြုံများခဲ့လောက်ပြီ ။ လမ်းကလေးပေါ်မှ စသည့်ဇာတ်လမ်း ၊ လမ်းကလေးပေါ်မှာ ဆုံးသည့်ဇာတ်လမ်း စသည်တို့နှင့် လမ်းကလေးခံစားတတ်လျှင်တောင် ရိုးအီသွားလောက်ပြီ ။ လမ်းလေးကို နောက်တစ်ချက်လှည့်ကြည့်ပြီး ရှေ့သို့သာ ဆက်လက်နင်းလာခဲ့သည်။ နေလည်းမြင့်လှပြီ လေ။ သည်အချိန်ဆို မြို့ထဲက စာအုပ်ဆိုင်လည်းဖွင့်လောက်ပြီ ။ ထိုစာအုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးပြီး စာအုပ်စဉ်မှာတင်ထားဖြစ်ခဲ့ရင်တောင် နောက်နှစ် ဖေဖော်ဝါရီလထိ ဖတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မထင် ။ ။
(၂၁ ၊ ဇူလိုင် ၊ ၂၀၀၇)
Posted by Aung Phyoe at 14:132comments: Links to this post
မနေ့က Public Holiday မှာ အနားရလို့ အလုပ်သမားတွေ ၊ ကျောင်းသားတွေ အလုပ်သွား ကျောင်းသွားဖို့ ပျင်းနေကြ တဲ့ နေ့တစ်နေ့ ၊ နက်ဖြန်အတွက်ကို ကြိုတင်ရင်ခုန်နေကြသော အချစ်ဦး ၊ အချစ်ထူး ၊ အချစ်ရူးတွေ မြူးနေကြတဲ့ နေ့တစ်နေ့ ဟာသူတို့ နိုင်ငံ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးရဲ့ မွေးနေ့ဆိုတာကို မေ့လျော့နေကြတဲ့ လူငယ်တွေ အတော်ကို များပါလိမ့်မယ် ။
ကျောင်းတုန်းက သမိုင်းတော်တယ် ဆိုတဲ့လူတွေလည်း ရမှတ်အတွက် ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ ကို ကျက်မှတ်ခဲ့ဖူးရင်တောင် ခုချိန်မှာမေ့နေဖို့ သေချာပြီ ။
ဗိုလ်ချုပ်ဆိုတာ မြင်းစီး ၊ ဓါးလွတ်ကိုင် ၊ စစ်ချည်တတ် ရုပ်တု တစ်ခုအဖြစ်သာ သဘောထားကြ တဲ့လူငယ်တွေ ။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာ ဒဏ္ဍာရီထဲက သူရဲကောင်းတစ်ယောက်လို သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ ပညာရေးခေတ်ထဲ ကလူငယ်တွေ ။
ခံယူချက် ၊ အတွေးအခေါ် အကြောင်း မပါဘဲ လုပ်ဆောင်ချက်သက်သက်ကို သာ သမိုင်းကြောင်းတစ်ခု အဖြစ်သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ ကျတော်တို့ ခေတ်ကလူငယ်တွေ ၊
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဆိုတာကို ပြည်သူ့တွေ စိတ်ဓာတ်ကပျောက်အောင် ဖျောက်ဖျက်ပစ်ခြင်တဲ့ အုပ်ချုပ်မှုအောက်က ခေတ်ပြိုင်လူငယ်တွေ ။
သည်လူငယ်တွေဟာ ကိုယ့်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ရဲ့ မွေးနေ့ကို မေ့နေကြ သတဲ့လား ? ။။
ဗိုလ်ချုပ်ကတော့ ခေတ်အဆက်ဆက်လူငယ်တွေ ကို သိပ်ကိုယုံကြည် ချက်ထားခဲ့ရှာတာ ။
ဒါပေမယ့် ကျတော်တို့ ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ အများဆုံးတွေ့ နေကြရတာက -
ကိုယ့်လူမျိုးကို တစိမ်းလူတွေကြားထဲ ထုတ်ဖော်ပြောဖို့ကို ရှက်ရွံ့စရာလို့ သတ်မှတ်ကြတဲ့ လူငယ်တွေ ။
ကိုယ့်တတ်လမ်း ငွေရရေးအတွက်သာ အဓိက ကြည့်ပြီး ကိုယ့်လူမျိုး ကိုယ့်ဘာသာကို စွန့်လွတ်ဖို့ ၀န်မလေးကြတဲ့ လူငယ်တွေ ။
မြန်မာစကား ၊ မြန်မာစာ ၊ မြန်မာ့သမိုင်း မကျွမ်းကျင် မတတ်သိတာကိုပဲ ဂုဏ်ယူနေတတ်တဲ့ လူငယ်တွေ ။
ဘာရည်ရွယ် ချက်မှမရှိပဲ လွင့်မြောနေကြတဲ့လူငယ်တွေ ။
ကိုယ့်မိသားစု ၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် သီးသန့်လေးတိုးတက်အောင်ကြိုး စားရင် မိမိကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူနေကြတဲ့ လူငယ်တွေ ။
ဗိုလ်ချုပ်ပုံမပါတော့တဲ့ ပိုက်ဆံအရွက်ကြီးတွေကို ရှာဖွေ ၊ လဲလှယ် ၊ သုံးဖျုံးရင်း မာန်တတ်နေကြတဲ့ခုခေတ် လူငယ်တွေ ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်စမ်းစစ်ကြည့်တော့လည်း သည်လိုလူငယ်တွေကြားမှ အရိပ်တစ်ခုပါပဲလေ ။
ကျတော်ကို ရှေးလူကြီးများရဲ့ ကြွေးဟောင်းကိုလည်း မကြေပါ ။ နောက်လူမျိုးဆက်သစ်တို့ အတွက် ကြွေးသစ်ကို ချပေးနိုင်ဖို့လည်း ဝေလာဝေး ။
ကျတော်တို့ တာဝန်မကျေခဲ့ပါ..။ တာဝန်လည်းမကျေသေးပါ..။
သည်လိုပြန်လည် စမ်းစစ်မိတော့မှ ဗိုလ်ချုပ်တို့အားလုံး မြန်မာပြည်တိုးတက် စေလိုတဲ့ စေတနာနှင့် စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကြိုးပမ်းခဲ့ကြ သူ အားလုံးကိုလည်း လူငယ်တစ်ယောက်အနေဖြင့် ရှက်ရွံ့စာတောင်းပန်ရပါသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ ကျေးဇူးတွေက ကျတော်တို့အပေါ်မှာ အမြားကြီး ။ အနည်းဆုံး ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့မှာ အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေ ကျင်းပ ။ ဗိုလ်ချုပ်အကြောင်း Media ပေါင်းစုံမှ ဂုဏ်ယူစွာ သီချင်းတွေလွှင့်
၊ သီခြား စာအုပ်စာတမ်းတွေ ဖြန့်ဝေ သည်လိုတွေမြင်ခြင်မိပါတယ် ။
ကျတော့်အတွက် အနည်းဆုံးတော့ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၃) ရက်နေ့နံနက်မှာ အိပ်ယာမှာ နိုးနိုးခြင်း -
"ထားရာမှာနေ စေရာသွား ၊ နွားနဲ့မခြားပေ
ကျွန်ဖြစ်မှ နွံနစ်ရပေ ၊ လွတ်မြောက်ရာလမ်းကို မှန်းဆသူရှာဖွေ
သခင်အောင်ဆန်း ၊ ဗိုလ်အောင်ဆန်း အောင်ဆန်းတဲ့ဟေ့
တစ်ခေတ်ဆန်းခဲ့တဲ့ နာမည်ပေ" -
ဆိုတဲ့ သီချင်း ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊
"ရာဇ၀င် အထုပ္ပတ္တိလည်း ရှိရမယ် ၊ မော်ကွန်းလည်းထိုးလောက်တယ် ၊
ဆိုတဲ့ တေးသံပဲ ဖြစ်ဖြစ်-
တစ်ခုခုကိုတော့ အိမ်က ရေဒီယို ၊ ဒါမှမဟုတ် ပတ်ဝန်းကျင် အသံချဲ့စက် တစ်ခုခုမှ ဖြစ်ဖြစ် ကြားရပြီး ဗိုလ်ချုပ်အတွက် တစ်စိမ့်စိမ့် ကျေးဇူးတင် ဂုဏ်ယူ နေချင်မိတော့တယ် ။
Posted by Aung Phyoe at 21:18 No comments: Links to this post
Labels: စာစု, မွှေးနေ့ဆုတောင်း
Posted by Aung Phyoe at 22:33 No comments: Links to this post
Posted by Aung Phyoe at 22:08 1 comment: Links to this post
အညာသားပြီပြီ ကျနော် သနပ်ခါးသိပ်ကြိုက်ခဲ့တာ ။ နောက်တော့လည်း ယောက်ျားလေးဆိုတော့ သနပ်ခါးနဲ့ဝေး သွားခဲ့တယ် ။ ဒါပေမယ့် ဟိုတလောကမှ သူငယ်ချင်းအစ်မ တစ်ယောက်နဲ့ စကားစပ်ရင်း သနပ်ခါးအကြောင်း ရောက်သွား မှ ဒါလေးအကြောင်း ခံစားကြည့်ဦးမယ် ဆိုပြီးရေးကြည့်မိခဲ့တာ ။ သူကိုယ်တိုင် ကလည်း ကျနော်ကို သနပ်ခါးတစ်တုံး လက်ဆောင်ပေးလို့ တော်တော်ကြီးကို မေ့နေခဲ့တဲ့ သနပ်ခါးလိမ်းရတဲ့ အရသာကိုရော ၊ သနပ်ခါးရနံ့ကိုရော ပြန်သတိရသွားစေခဲ့တာ ။ ( အစ်မကိုလည်း သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
ကျတော်တို့ သည်မှာတော့ သနပ်ခါးလိမ်းတဲ့သူ ကိုတွေ့နိုင်ဖို့အတော့်ကို ရှားတာ ၊ မြန်မာအမျိုးသမီး စစ်စစ်တွေကိုယ်တိုင် သနပ်ခါးကိုကျောခိုင်းကျတော့ သနပ်ခါးရနံ့ဆိုရင် မူးလို့ရှုစရာကိုမရှိတာပါ ။
ကျတော့် ယောက်ျားလေးသူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကတော့ ကျတော်သနပ်ခါးလိမ်းမယ် ဆိုတော့ အသားမည်းတဲ့ကျတော့်ကို “သနပ်ခါးလိမ်းရင် မင်းအသားနည်းနည်းဖြူလာမှာပေါ့ကွ” ဆိုပြီးစတော့တာပဲ (အေးလေ… သူကတော့ တရုတ်ဆိုတော့ ခရုသင်းစွဲတယ်ထင်ရလောက်အောင် ကိုဖြူတာ :D ) ။ သူကတော့ “ရန်ကုန်သူ” သီချင်းကို ဖျက်ဆိုပြီးတော့တောင် ကျတော့်ကိုနောက်နေသေးတယ် ။ ဘာပဲပြောပြောလေ ရန်ကုန်သူ ဖြူဖြူနုနုလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အညာသူ ညိုပြာညက်တွေပဲ ဆိုဆို သနပ်ခါးလိမ်းထားတဲ့ မိန်းကလေး တစ်ယောက်ဟာ လှတာပဲ မဟုတ်လား ။ ခံစားကြည့်ပါ ။
ချစ်သူ့ပါးနုနု ကို ပထမဆုံးနမ်းခွင့်ရခဲ့တုန်းက ယစ်မူးသွားစေခဲ့တဲ့ အနောက်တိုင်း မိတ်ကပ်နံ့ကို ရင်ခုန်စွာ ပြန်လည်အောက်မေ့ရင်း အဖွားရဲ့ပါးက သနပ်ခါးနံ့ကြူကြူကို သူသတိရမိခဲ့တယ် ။ နောက်ပိုင်းတစ်လျှောက်လုံး သနပ်ခါနံ့ သင်းသင်းလေးကို သူ့ခမျာ လွမ်းနေရဆဲဖြစ်သည်။
ဟုတ်ခဲ့သည်ပဲလေ ။ သူ့အဖွားအညာသူကြီးက သနပ်ခါးသိပ်ကြိုက်ခဲ့တာမဟုတ်လား ။ ရေကြဲကြဲနဲ့သွေးထားတဲ့ သနပ်ခါးကို သူငယ်ငယ်တုန်းကဆို နံနက်မျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း သူ့အဖွားကိုယ်တိုင်လိမ်းပေးနေကြ ။ သနပ်ခါးလိမ်းပေးတိုင်းလည်း ရှေးလူကြီးများ ထုံးစံ `ဗုဒ္ဓံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ´ ၊ `ဓမံ္မသရဏံ ဂစ္ဆာမိ´ ၊ `သံဃံသရဏံ ဂစ္ဆာမိ´ လို့ သရဏဂုံ (၃) ပါးရွတ်ဆိုပြီး နဖူးနဲ့ ပါးတစ်ဖက်တစ်ချက်စီက စပြီးလိမ်းပေးနေကျ။ သူကလည်း သနပ်ခါးနံ့မွှေးမွှေး ၊ အသားတအေးအေးနဲ့ နေရတာကို သိပ်သဘောကျခဲ့တာ ။ ဒါပေမယ့် ဆောင်းနံနက်ခင်းတွေကျရင်တော့ အဖွားနဲ့စိတ်ကောက်မြဲ ။ အညာရဲ့ဆောင်းရဲ့ နံနက်ခင်းအေးအေးနဲ့ သနပ်ခါးရေနဲ့ အေးမြတဲ့ အထိအတွေ့ဟာ မျက်နှာတစ်ပြင်လုံး ထုံထက်သွားအောင်အေးတာမဟုတ်လား ။ အဖွားကတော့ ဆောင်းမှာ သနပ်ခါးလိမ်းရင်အသားမပတ်ဘူးဆိုပြီး အတင်းလိမ်းပေးနေကျ ။
သူ့အမေကျတော့လည်း သနပ်ခါးကို ထူပိန်းနေအောင်လိမ်းတတ်သူပင် ။ အညာနေပူကြဲကြဲမှာ စက်ဘီးနင်းပြီး ကျောင်းကပြန်လာလို့ ချွေးဒီးဒီးကျသည့်တိုင် သနပ်ခါးကတော့ မပျက်ပေ။ အမေကျောင်းကပြန်လာ လို့ သူ့ကိုချီပိုးတိုင်း ချွေးနံ့ရောနေသည့်တိုင် သနပ်ခါးနံ့ကတော့ သင်းမြဲ။ သူငယ်ငယ်တည်းက သည်လိုမွှေးအနံ့တွေကို ရင်နှီးခဲ့သည်လေ ။ သူ့ကိုတစ်ခါတစ်ခါ အမေကိုယ်တိုင်သနပ်ခါးလိမ်းပေးရင်တော့ သူ့နည်းနှင့်သူ ခပ်ပျစ်ပျစ်လေးသွေးလို့ ထူထဲနေအောင်လိမ်းပေးမြဲ ။ အရေပြားတွေ ကျစ်မာသွားသယောင်ခံစားရအောင်ထိကို ထူထူလိမ်းပေးခဲ့တာ သူမှတ်မိသည်။
နံနက် မျက်နှာသစ်ပြီးတစ်ကြိမ် ၊ ရေချိုးပြီးတစ်ကြိမ် သနပ်ခါပါးကွက်ကြားလေးကွက်ပြီး နေခဲ့ရသည့် ကလေးဘ၀နေ့တွေမှာ သူပျော်ခဲ့ဖူးတာပဲ။ နောက်အဝေးမှာ အလုပ်သွားလုပ်နေရတဲ့ သူငယ်ငယ်ကသိပ်မမှတ်မိတတ်တဲ့ အဖေပြန်လာတိုင်း နှုတ်ဆက်နေကြ `အား…ပါ…. အဖေ့သားကြီး ကသိပ်မွှေးပါလား´ ဆိုပြီး ပွေ့ဖက်နမ်းရှုံ့ရင် သူ့အဖေကို ပြန်မှတ်မိသွားတတ်ခဲ့ တာပဲလေ။ မှတ်မှတ်ရရ သူ့အဖေပထမဆုံး ၀ယ်လာတဲ့ ကင်မရာတစ်ပတ်နွမ်းလေးနဲ့ ပြန်လာတဲ့နေ့က သနပ်ခါးပဲကြား ပါးကွက်ကြားလေးနဲ့ ရေချိုးပြီးစ ကွပ်ပစ်ပေါ်မှာ ထိုင်နေခဲ့တုန်းပေါ့။ အဲသည်မှာပဲ သူကျုံ့ကျုံ့လေးထိုင်ပြီး ပြုံးနေတဲ့ ပုံလေးကို အဖေရိုက်ပေးခဲ့တာ ။ နောက်ကူးပြီးတော့လည်း ပုံလေးက သိပ်လှတာဆိုပြီး သူ့အဖေက Wallet ထဲမှာ အမြဲဆောင်ထားနေကျ ။ နောက်တော့ စဉ်းစားကြည့်မိသမျှ ရိုက်ခဲ့သမျှဓာတ်ပုံတွေထဲမှာ အဲသည်ပုံလေးကအလှ ဆုံး သဘာဝအကျဆုံးပဲမဟုတ်လား ။
တကယ်တကယ်တော့ သူတို့မြို့လေးကိုယ်တိုင်ကလည်း သနပ်ခါးနဲ့ မစိမ်းလှပါ ။ မြို့ကလေးရဲ့ ဈေးထဲမှာ သနပ်ခါးဆိုင်တွေလည်း အများကြီး၊ သနပ်ခါးဟာလည်း မြို့လေးရဲ့ အရေးပါတဲ့ စီးပွားရေး ထွက်ကုန်တစ်ခု ၊ နောက်မြို့ကလေးသူ ညိုပြာညက်တွေရဲ့ ပါးပြင်နဲ့ သနပ်ခါး ဆိုတာလည်း ခွဲလို့ရနိုင်ကောင်းတာမှ မဟုတ်ဘဲ ။ လက်လုပ်လက်စား အလုပ်သမ မှအစ မြို့မျက်နှာဖုံး သမီးအဆုံး သနပ်ခါးနဲ့ ကင်းတဲ့အညာသူဆိုတာ တကယ်ကိုမရှိတာပါ ။
ကလေးဘ၀က သူကြားခဲ့ဖူးတဲ့ ကဗျာတွေ ၊ သီချင်းတွေထဲမှာရော အညာနဲ့ သနပ်ခါး အကြောင်းဖွဲ့ ထားတာ တော်တော်များခဲ့ပါသည် ။ ``ရွှေဘို သနပ်ခါးတုံးများ ရန်ကုန်လိမ်းဖို့ယူ ၊ ဘယ်လိုအသားမည်းမည်း ၀ါဝါညက်ညက်ဖြူ´´ ဆိုတဲ့ သီချင်းဟာ သူ့အဖိုးလက်ထက်ကပေါ် ခဲ့တာဆိုပေမယ့် သူကလေးဘ၀ကျတော့ တစ်ကျော့ပြန်ဆိုတေးတွေကြားမှာ ခေတ်စားဆဲပါပဲ ။ သည်သီချင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူ့အဖွားပြောတတ်တဲ့ ``ဘယ်နှယ်တော် .. ရွှေဘိုသနပ်ခါးများ နနွင်းရောင်တောက်တောက်နဲ့ ကျုပ်တို့ ရှင်မတောင်လောက် မကောင်းပေါင်၊ မက်လည်းမမက်စက်ပေါင်´´ ဆိုတဲ့ Comment ကိုတော့ ခုခေတ် “စိုးစန္ဒာထွန်း” ရဲ့ ပြန်ဆိုတေး ကိုနားထောင်ရသည့် တိုင် သူ့အတွက်မရိုးနိုင် ။ ကိုယ့်ဒေသစွဲ ၊ ဌာနေစွဲကြီးလှတဲ့ သူ့အဖွား ….. ။ ခုလို ဌာနေကို စွန့်ခွာပြီးနေရတဲ့ သူ့မြေးကို ခုနေများတွေ့ရင် ဘယ်လိုသဘောထားပါ့မလဲ ။ သူတွေးကြည့်ဖူး ပါသည်။ ဒါပေမယ့် သူငယ်ငယ်တုန်းကတော့ အမေ နဲ့ အဖွားပါးပြင်က သနပ်ခါးနံ့ကြူကြူ ကိုနှစ်သက်စွာ ရှုရှိုက်ရင်း သူ့တို့အရိပ်မှာ အေးချမ်းစွာ မှီခိုခဲ့ဖူးပါသည် ။
သူနည်းနည်းလူလားမြောက်လာသည်နှင့်အမျှ သနပ်ခါးနဲ့ အမြဲထိတွေ့ရတဲ့ ဘ၀နဲ့ တဖြည်းဖြည်းဝေး ကွာလာခဲ့ရသည် ။ သူ့အဖေ အလုပ်ရှိရာ အောက်ဘက် ``ပဲခူးတိုင်း´´ ကိုပြောင်းရွေ့လာကြရတာလည်း တစ်ကြောင်းပါ ။အောက်ဖက်မှာအညာလောက်တော့ သနပ်ခါးမပေါ ။နောက် (၆) တန်း ၊ (၇) တန်းအရွယ်မှာ သနပ်ခါးလိမ်းဖို့ ငြင်းဆန်တတ်ခဲ့ပြီ ။ သူ့ကိုကလေးလေးလို့ ထင်နေဆဲ အဖွားက ဘာလို့လဲလို့ မေးရင် ပျင်းလို့မလိမ်းချင်တာပါလို့ မရေမရာဖြေခဲ့တာပါ ။ နောက်တော့ သူ့မျက်နှာ က သနပ်ခါးကင်းလာတော့သည် ။ နောက်လူပျိုပေါက်အရွယ် မျက်နှာအသားကြမ်းလာတော့ ညည အိပ်ယာဝင်ခါနီးတိုင်း သနပ်ခါးလိမ်းတတ်တာကလွဲ လို့နောက်ပိုင်းမှာ သနပ်ခါးဆိုတဲ့ အရာဟာ သူနဲ့သိပ်ကိုဝေးကွာခဲ့ပြီ ။ သနပ်ခါးနဲ့ သူနဲ့ဟာလည်း သီလရှင်နဲ့ဘီးလောက် ဝေးကွာခဲ့လေပြီ ။
နောက်ပိုင်းမှာတော့ သနပ်ခါးပင်တောင် မပေါက်နိုင်တဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သူနေခဲ့ရတဲ့ နှစ်တွေအတော်ကြာပြီပေါ့ ။ အဖွားဆုံးပြီး နောက်ပိုင်း သနပ်ခါးလိမ်းဆဲဖြစ်တဲ့ သူ့အမေက လည်းသူနဲ့လိုက်မနေ နိုင်၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က အသားဖြူမိန်းကလေးတွေဟာလည်း သနပ်ခါးနဲ့ဆက်စပ် တွေးကြည့်မိရင် တော်တော်မအပ်စပ်ပါ ။ ဒါကြောင့်ခုချိန်ခါမှာ သူ့ချစ်သူ့ပါးမှ သနပ်ခါးနံ့ကို မရခဲ့တာ သိပ်တော့မထူးဆန်းပါ ။
သူကဗျာတစ်ပုဒ်ကို မှတ်မိတယ် ။ “ငွေတာရီ” ရဲ့ကဗျာလေးပေါ့ ။
ထန်းညက် ချိုချို ။
ငြိုငြင်နဲ့ စိတ်ထဲ ။
ဟုတ်ပါတယ် ။ သူ့အတွက်အညာပြန်တိုင်းရတတ်တဲ့ လက်ဆောင်ဟာ သနပ်ခါးပါ ။ ဆရာ သိန်းဖေမြင့် ရဲ့ “အညာပြန်” ဆောင်းပါးရှည်ထဲက ချို့တဲ့ဆင်းရဲ့တဲ့ ဆွေမျိုးတွေကတောင် လက်ဆောင်အဖြစ် သနပ်ခါးတုံးလေး တွေလက်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတာ လုပ်ဇာတ်မဟုတ်ခဲ့ပေါင်ကွယ် ။ သူကိုယ်တိုင် ကျောင်းသားဘ၀တုန်းကလည်း အညာကပြန်တိုင်း ကျောင်းဆရာမတွေကို သနပ်ခါးတုံး လက်ဆောင်ပေးရင် ၀မ်းသာအားရလက်ခံပြီး ပေးသူဂုဏ်တတ်ခဲ့တာပဲလေ ။ ဒါပေမယ့် ခုချိန်မှာ သူအညာကပြန်လာလို့ သနပ်ခါးတုံး လက်ဆောင်ပေးရင်တော့ သူ့ချစ်သူအပါအ၀င် အားလုံးက သူ့ကိုဝိုင်းဟားကြလိမ့်မည် ထင်သည် ။ သူဒါတွေနဲ့ ဝေးခဲ့ရပြီ ။ လူဆိုတာ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်စွာ ကျင်ကြံနေထိုင် တတ်ရမည် ဆိုတာကို သူလက်ခံခဲ့ရတာ ကြာလှပြီပဲလေ ။
ဒါပေမယ့် သူ့အိပ်မက်တွေမှာ ပါလာတတ်တဲ့ အဖွားရဲ့ ပါးပြင်ဟာလည်းသနပ်ခါးနံ့ သင်းဆဲပါ ။ သူပြန်အလာကိုအသေအချာ စောင့်နေမယ့် အမေ့ပါးမှာလည်း သနပ်ခါးတို့ ထူထဲစွာရှိနေမှာပါ ။ သူအညာပြန်ရင်လည်း သူ့ဆွေမျိုးတွေ ၊အသိတွေက သနပ်ခါးလက်ဆောင်ပေးလိမ့်ဦးမှာလည်း အသေအချာပါ။ ဒါပေမယ့် ခုလောလောဆယ်မှာတော့ သနပ်ခါးနံ့သင်းသင်းကို သူတော်တော်လေးလွမ်းဆွတ်နေရပါသည် ။
(၁၇ ၊ ၁ ၊၂၀၀၈)
Posted by Aung Phyoe at 23:312comments: Links to this post
Labels: စာစု, ရသစာတမ်း